Waldhabdeen Ameerikaafi Chaayinaa addunyaa intarneetii bakka lamatti qoodaa laata? - BBC News Afaan Oromoo
Waldhabdeen Ameerikaafi Chaayinaa addunyaa intarneetii bakka lamatti qoodaa laata?
3 Muddee 2019
Lammiileen Chaayinaa akka namoota biyyoota garaa garaa intarneeta gubbaa waan fedhan soqanii hin argatan. Fakkeenyaaf, osoo lammiin Chaayinaa tokko Guugilii irratti Chaayinaa jedhee barreesse deebin argatu kan namoonni biyyoota biraa argatanirraa adda.
Biyyi addunyaa keessaa lakkoofsi namoota hedduu keessa jiraatu Chaayinaan biyyoota intarneeta to'atan keessaa sadarkaa jalqabaarra jirti.
Ogeessonni akka jedhanitti immoo si achi intarneetin lamatti hirama: kan Ameerikaan hogganamuufi kan Chaayinaan hogganamu.
Dhimmoota baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraaf fayyadamuuf isin gargaaran
Yaada kana kan kaasan Hogganaa Olaanaa Guugil Eriik Shimiitidha.
Fayyadamtoonni intarneeta Chaayinaa kan mootummaan akka ilaalan isaanif eeyyame qofa ilaalu. Fakkeenyaaf: akka Fesbuuki, Tiwiitara, Dirooppiboksi ykn Pintarast kanneen jedhaman fayyadamuu hin danda'an.
Addabaabayi Taayimen irratti ajjeechaa raawwates ta'e dhimma Pirezidant Shi Jin Piing qeeqa barreeffame intarneeta gubbaa barbaadani ilaaluu hin danda'ani.
Biyya Chaayinaa keessatti namni hedduun jiraatus dhaabbileen Tekinolojii addunyaa gurguddoon hojjechuu waan hin dandeenyef dhiisanii deemaa jiru.
Bara 2017 dhaabbanni Appil bilbila gabaa Chaayinaatif dhiheessurraa appilikeeshiniin 'Niw York Taayims' akkasumas 'Iskaayipii' akka balleessu itti himameera.
Dhaabbanni Ameerikaa bilbila oomishu ajaja kana fudhateera.
Miidiyaan hawaasummaa Linkedin namoota addunyaa guutuu hojii barbaadaniifi hojii qaxaran walitti fiduf hojjetamus lammileen Chaayinaa garuu namoota Chaayinaa ala jiran waliin wal arguu hin danda'ani.
Dabalataanis, marsariitiin ergaa siyaasaa qabu hundu lammiileen Chaayinaa akka hin arganne ni ta'a.
Dureeyyonni teknooloojii maaliif Itoophiyaa filatu?
Yunivarsiitii of Biritiish Kolombiyaatti dhimma aadaa Chaayinaa kan qoratan Gargaaraa Pirofeessara kan ta'an Renren Yaang akka jedhanitti mootummana Chaayinaa to'annoo kana hunda kan taasisu ilaalcha lammiileen biyyattii dhimma paarti Koministiifi waa'ee biyya isaanii to'achuufi jedhan.
Chaayinaa keessatti Guugiliifi Waatisaappin dhorkamanis kanneen Baayiduufi Wiichaat jedhaman ni fayyadamu.
27 Sadaasa 2019